Baqattoonni Itoophiyaa Yaman jiraatan ukkaamsamanii fudhatamaa jiru - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baqattoonni Itoophiyaa Yaman jiraatan ukkaamsamanii fudhatamaa jiru
Bara 2015 qofa keessatti baqattoota gaanfa Afrikaa irraa ta'an 37,000 oltu Yaman seene
Akka gabaasa Dhaabbata Godaansa Idiladdunyaatti (IOM) baqattoonni lammii Itoophiyaa, irra jireessi isaanii Oromoo, humnoota badiin ukkaamfamanii fudhatamaa jiru. Humnoonni daldala namaa irratti bobba’an kunniin baqattoota ukkamsanii erga fudhatanii booda gara daangaa Sa’uud Arabiyaatti geessu. Sana booda baqattoonni gadi lakkifamuuf maallaqa kan gaafataman ta’uu isaati gabaasni IOM kan ifa taasise.
Baqattoonni kunniin, durumaa kaasee kan rakkoon cimaan imala hadhaayaa irratti isaan bobbaase, qarshii $600 – $1000 akka kaffalan gaafatamu. Kana qofaa miti kan jiruu baqattootaa daran hadhaayaa godhe. Baqqattoota irra miidhaan qaamaa gayus cimaadha. Keessumattuu isaan maallaqa gaafataman kaffaluu hindandeenne kan reebamaniifi rasaasaanis rukutaman ta’uu isaati gabaasni IOM kan addeessu.
Balaan baqattoota irra gayaa jiru hedduu suukkanneessa ta’uu isaati kan dubbi-himaan IOM Jo’eel Milmaan dubbate. Rakkooleen kunniin hangi tokko hojjattoota gargaarsaan galmaayuu isaati kan dubbi-himaan kuni ibse.
Itti dabaluudhaanis, erga wolworaansi mootummaafi garee Huutii jidduti ka’ee asi, baqattoonni Itoophiyaa 3,500 gargaarsa IOM’n gara biyya isaaniitti deebifamuu mirkaneesseera.
Gara Yaman baqqachuun akkuma itti fufetti
Osomo rakkoon woraanaafi nama ukkaamsuu kuni bal’inaan mul’atu, baqqattoonni biyyoota Gaanfa Afrikaa irraa ta’an ammas hedduminaan gara Yamanitti ce’uu kan itti fufan ta’uu IOMfi UNHCR ifa godhaniiru. Bara 2015 keessatti qofa baqattoota 37,000 oltu Yaman seene. Irra jireessi isaanii Itoophiyaa, Somaaliyaafi Eritiriyaa irraa kanniin baqataniidha. Baatii Bitootessaa eegalee, erga Sa’uud Arabiyaan garee Huutii haleeluu eegaltee as jechuudhaa, baqattoota 10,500 caalantu galaana Diimaa qaxxaamuree Yaman quphate.
Wolworaansi Yaman lammiileefi baqqattootas balaaf saaxileera
Yaman, erga woraanni humnoota biyyattii adda addaa jiddutti ka’ee, lammii biyyattii qofaaf osoo hintaane baqattootaafis dirree badiifi rakkoo ta’uu isiiti kan yeroo dheeraadhaaf gabaafamaa ture. Biyyoonni heddu lammiilee isaanii Yaman keessa jiraataa turaniif birmatanii lubbuu isaanii badii irraa hanbisuu danda’aniiru. Kanniin gargaarsa dhabanii achumatti hafan ammoo jireenya dukkanooftuufi abdii dhabeessa dhiibuutti seenaniiru. Wolumaagalatti, lubbuun baqattoota hedduu qarqara hallayyaa dhabamaa irra gayuu isiiti IOM kan gabaase.
Previous articleNASA’n suuraa ardii fageenya miliyoona km 1.6 irraa kaasuu danda’eera
Next articleSenaatar Maarkoo Ruubiyoo Obaamaan dhimma mirga namaa Itoophiyaaf xiyyeeffannaa akka laatu gaafate